Ifektri ye-Iron Enamel Cookware ye-Cast I-China I-Enron Enamel cookware, abaxhasi
Phonsa Iron Enamel Cookware
Phosa Iron Enamel Casserole
Phaya Iron Enamel Fry Pan
Skillet yentsimbi ye-Iron
Phosa i-Iron yokuCoca ngaphambi kwexesha
UCast Iron wagqiba uCasserole
Phaya i-Iron Camping Cookware
Phosa i-Iron Griddle
Phosa Iron Phambi kwangaphambili yeFry
Skillet I-Soni echazwe kwangaphambili
Isibambiso segranite kunye nePestle
Imarble Morn kunye nePestle
Ezinye iimveliso zamatye
1. Ukukhanya okuphezulu kunye ne-enamel egqibeleleyo ukugqiba ukupheka kunye nokusebenzela. Umkhenkce oxhathisayo, umaleko ongalungisiyo, ongenabungozi, Matte emnyama ngaphakathi.
2. Ubungakanani bokubambisa, izibambo zemigca ebanzi ye-angle ibambe intuthuzelo kunye nozinzo.
3. Isiseko se-Thicker senza ngakumbi ukuhanjiswa kobushushu.
Uyilo lwe-tiered lid luququzelela ukubilana kwangaphakathi kokutya okufumileyo.
Iinkcukacha zoMveliso: JT101, JT102 Izixhobo: ubungakanani be-Enamel: DIA: 25 * 5 ngoku26 * 5.5 Ukupakisha: Imathiriyeli yeCarton: yentsimbi enamel ngaphakathi. Isinyithi ebunjiweyo ibufumba ubushushu kakuhle kwaye ilungele ukucheba kabukhali. Ukudityaniswa koqweqwe lwaselwandle kuqinisekisa umphumo ongathathi ntweni. Ilungele abapheki abangeniswayo: ipani ye-grill inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zabapheki, kubandakanya ukwenziwa. Ukumelana nobushushu: kungasetyenziselwa ehovini nakwi-grill ngaphandle kweengxaki. Imigangatho esemazantsi epanini iqinisekisa ukuba amanqatha ayasusa kwaye ...
Iinkcukacha zemveliso: I-HF 87A yezixhobo: ubungakanani be-Enamel: I-DIA: 23 * 23CM Ukupakisha: Isixhobo seCaton: yentsimbi enamel ngaphakathi. Isinyithi ebunjiweyo ibufumba ubushushu kakuhle kwaye ilungele ukucheba kabukhali. Ukudityaniswa koqweqwe lwaselwandle kuqinisekisa umphumo ongathathi ntweni. Ilungele abapheki abangeniswayo: ipani ye-grill inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zabapheki, kubandakanya ukwenziwa. Ukumelana nobushushu: kungasetyenziselwa ehovini nakwi-grill ngaphandle kweengxaki. Imigangatho esemazantsi epanini iqinisekisa ukuba amanqatha ayasusa kwaye inyama ye ...
Iinkcukacha zeMveliso: Isixhobo seJT: ubungakanani be-Enamel: DIA: 33.3 * 21.8 * 3.2 Ukupakisha: Imathiriyeli yeCarton: yentsimbi enamel ngaphakathi. Isinyithi ebunjiweyo ibufumba ubushushu kakuhle kwaye ilungele ukucheba kabukhali. Ukudityaniswa koqweqwe lwaselwandle kuqinisekisa umphumo ongathathi ntweni. Ilungele abapheki abangeniswayo: ipani ye-grill inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zabapheki, kubandakanya ukwenziwa. Ukumelana nobushushu: kungasetyenziselwa ehovini nakwi-grill ngaphandle kweengxaki. Imigangatho esemazantsi epanini iqinisekisa ukuba amanqatha ayasusa kwaye inyama ...
Iinkcukacha zeMveliso: HF70A, HF 71A Izixhobo: ubungakanani be-Enamel: DIA: 6.5CM, DIA: 8 CM Ukupakisha: Imathiriyeli yeCarton: yentsimbi enamel ngaphakathi. Isinyithi ebunjiweyo ibufumba ubushushu kakuhle kwaye ilungele ukucheba kabukhali. Ukudityaniswa koqweqwe lwaselwandle kuqinisekisa umphumo ongathathi ntweni. Ilungele abapheki abangeniswayo: ipani ye-grill inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zabapheki, kubandakanya ukwenziwa. Ukumelana nobushushu: kungasetyenziselwa ehovini nakwi-grill ngaphandle kweengxaki. Iigroves ezantsi kwepaneli ziqinisekisa ukuba amadreyini alindileyo ...
Iinkcukacha zeMveliso: JT B29, JT B34: Izixhobo: Cast Iron Enamel ubungakanani: 30 * 23 * 11 yale33.5 * 25.5 * 13.3 Ukupakisha: ibhokisi 1.Lokukhanya okugqwesileyo koqweqwe olufanelekileyo kugqibelele ukupheka nokusebenza. I-2.Scratch-immune, i-stain-immune, i-non-toxic, i-matte emnyama yangaphakathi enamel. 3.Sure-grip, ii-wedge ze-engile ezibanzi zentambo zentuthuzelo kunye nozinzo. Isiseko seT 4.icker senza ngakumbi nangakumbi ukuhambisa ubushushu. Uyilo lwesivalo esenziwe kakuhle luququzelela ukomelela kwangaphakathi kokutya okumnandi okunomswakama.
Iinkcukacha zeMveliso: JT B29, JT B34: Izixhobo: Cast Iron Enamel ubungakanani: 30 * 23 * 11 yale33.5 * 25.5 * 13.3 Ukupakisha: ibhokisi 1.Ligter enamel enamel ogqibeleleyo ogqibeleleyo wokupheka nokusebenza. I-2.Scratch-immune, i-stain-immune, i-non-toxic, i-matte emnyama yangaphakathi enamel. 3.Sure-grip, ii-wedge ze-engile ezibanzi zentambo zentuthuzelo kunye nozinzo. Isiseko seT 4.icker senza ngakumbi nangakumbi ukuhambisa ubushushu. Uyilo lwesivalo esenziwe kakuhle luququzelela ukomelela kwangaphakathi kokutya okumnandi okunomswakama.
Iinkcukacha zemveliso: JT B29, JTB34: Izixhobo: Cast Iron Enamel ubungakanani: 30 * 23 * 11 yale33.5 * 25.5 * 13.3 Ukupakisha: ibhokisi 1.Ligter enamel enamel ogqibeleleyo ogqibeleleyo wokupheka nokusebenza. I-2.Scratch-immune, i-stain-immune, i-non-toxic, i-matte emnyama yangaphakathi enamel. 3.Sure-grip, ii-wedge ze-engile ezibanzi zentambo zentuthuzelo kunye nozinzo. Isiseko seT 4.icker senza ngakumbi nangakumbi ukuhambisa ubushushu. Uyilo lwesivalo esenziwe kakuhle luququzelela ukomelela kwangaphakathi kokutya okumnandi okunomswakama.
No. 505 Igumbi, iZhongyuan isakhiwo, No.368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei Pro, China